Indlela yokwenza ifoni iphelelwe ephepheni: ividiyo, isithombe, umdwebo
Imisebenzi yephepha, njengezo zonke imikhiqizo eyenziwe ngezandla, ihlonishwa ukuthi ihlanganiswe engxenyeni yomphefumulo. Ungenza noma yini ephepheni, ngisho nefoni. Labo abangazange bazivivinye ngokwabo kulo msebenzi, ungaphelelwa ithemba. Konke kudingeke ukuba kusebenze, kwanele ukukhombisa ukunemba nokubekezela okuncane. Ifoni yephepha - lokhu akuyona nje into ethakazelisayo yezandla, kodwa futhi ithoyizi elihle kakhulu yengane.
Isinyathelo-nge-Isinyathelo Imiyalo yokwenza ifoni kusuka kuPhepha
Njengoba usuqale iphutha, ungathola ukuthi ungenza kanjani ifoni ephuma ephepheni. Phela, kunezindlela eziningi zalokhu. Uma kungenakufika engqondweni, ungasebenzisa imiyalo eyenziwe ngomumo.
Indlela yokwenza ifoni ehleliwe iphepheni
Uma ufuna futhi isikhathi ungajabulisa ingane yakho ngesitokisi esisha esenziwe ngekhadibhodi. Ngaphezu kwalokho, isikebhe, isembozo esiyindilinga (isibonelo, kusukela ebhokisini elinamakhadi ancibilikile), umbusi, ipensela, ucingo, isikulufa kanye ne-tape encane iyasiza emsebenzini. Ukwenza ifoni ehlelekile ephepheni ngezandla zakho, kuzodingeka ulandele lezi zinyathelo:
Okokuqala kwekhadibhodi enekhisi kuyadingeka ukusika ithempulethi, njengesithombeni, sokuqala kokuyibeka ngosizo lwepensela elula.
Encwadini! Ubukhulu bube ngamasintshi, 1 intshi cishe ngo-2.5 ​​cm.
Bese uqhubekele kumklamo wokudayela. Kubalulekile ukusika embuthaneni ofanayo, ebangeni elifanayo kusuka komunye nomunye, imibuthano efanayo. Ungabashada ngekhampasi noma udwebe imali yesayizi elungile. Engxenyeni esemaphakathi yombuthano kufanele futhi enze umgodi omncane. Ikhadibhodi ehlotshisiwe idinga ukusika umjikelezo wesayizi encane. Zombili izibalo zixhunywe yisikrini esiphakathi, bese isibalo siboniswa ngokwendlela yokubeka amadijithali ngehora.
Isinyathelo esilandelayo yi-iqoqo lendawo. Ifoni kufanele iphikiswe ngendlela yokuthi ikwazi ukuyiveza ukuhamba kwethenda. Ukuphela kwayo kufanele kudluliselwe ngaphakathi kweso. Khona-ke isisekelo sihlangana ndawonye. Ukuze ulethe ifoni ephepheni kuze kube sekupheleleni, udinga ukusika izinhlangothi zecala bese uzihlanganisa, kodwa awukwazi ukukwenza. Ukwakha intambo, thatha i-riboni bese ubambelela kumateyipu wokunamathisela ohlangothini.
Isinyathelo sokugcina ukudala ithubhu. Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka udwebe ukuma okufunayo kwikhasi lekhadibhodi. Udinga izingxenye ezimbili ezifanayo zezinto ezisehlangothini kanye ne-pair of strips phezulu nangaphezulu. Lezi zikhala kufanele zinqunywe futhi zenziwe. Ukuphela kwamahhala kwe-tape kuhlanganiswe ne-tape yokunamathisela e-tube. Ukudayela kukhonjiswe ngesikrini kulesi cala.
Ukuzama ukuklama, ungenza ifoni enjalo ephepheni, lapho ingane izojabula khona.
Indlela yokwenza i-iPhone ifoni yephepha le-7
Izingane zanamuhla azikwazi ukuzicabangela ukuphila kwazo ngaphandle kwamafoni. Kancane kunabo bonke, ungabenza baphume ephepheni. Isibonelo, imodeli eyaziwa emhlabeni wonke iPhone7, ezobukeka njengeyodwa yangempela. Ukuze wenze lokhu, udinga amathuluzi afana ne-glue, izikhali, ipensela.
Okokuqala, kubalulekile ukuthola izikhala ezilungiselelwe okwenziwe nge-iPhone kwi-Intanethi. Umklamo wabo wenza umkhiqizo oseduze kule foni. Uma inketho edingekayo itholakala, udinga ukuphrinta ishidi ngezikhala bese usika amaphaneli esizayo e-iPhone kusuka ephepheni. Amacwecwe aqanjiwe asetshenziselwa amakhadibhodi futhi alandelwe eceleni komjikelezo. Khona-ke kudingeka badakwe ngezikhali.
Zombili izinhlangothi zekhadibhodi zingabhalwa kufanele zigcotshwe ngeglue, bese ubamba ama-panels wephepha le-iPhone. Khona-ke, usebenzisa umbusi, udinga ukulinganisa ububanzi bombuso ohlangothini lwefoni bese unquma imingcele yemingcele edingekayo ukuze ukwazi ukuyinamathisela ngeglue nxazonke ze-iPhone.
Ifoni ekhishwe ephepheni isilungile. Uma ngabe i-preforms ephrintiwe isiphelile ubuso bombuso ngesithombe sezo zonke izakhi zokusebenza, zinganqunywa futhi zifakwe emgqeni wekhadibhodi ukwenza i-iPhone ibonakale engokoqobo.
Indlela yokwenza ifoni kumasu we-origami
I-origami yezobuchwepheshe ithandwa phakathi kwabathandi bezandla zephepha. Ukusebenzisa, ungenza izinto eziningi ezithakazelisayo, kuhlanganise nefoni. Ngezansi imilayezo elula kakhulu ongayenza ngayo ifoni ephathekayo evela ephepheni ngamasu we-origami kwanoma iyiphi imodeli ngisho nasenganeni:
Okokuqala udinga ukulungisa ishidi lesimo sikwele.
Izinhlangothi zangakwesokunxele nezingakwesobunxele zigoqa kancane. Izenzo ezifanayo zenziwa ngecala elingenhla, kuphela ngebubanzi obubanzi befolda.
Ifolda efanayo ifakwa kusuka ngezansi.
Khona-ke izingxenye ezingenhla nezingezansi ziphendukele ngaphesheya. Ukugubha ngesikhathi esifanayo cishe kabili kokuqala. Esithombeni ungabona ukuthi ubukeka kanjani ngemuva komkhiqizo.
Okulandelayo udinga ukuvula umkhiqizo ngokuqondile futhi uvule wonke amakhonksi. Kudingeka ukulungiswa kusuka ngakwesokunxele, ngakho-ke akugodli.
Okulandelayo, umaka uzoba kuphela ukudweba isikrini, udwebe zonke izakhi.
Ifoni eyenziwe ephepheni ngesimiso se-origami isilungele.
Ividiyo: indlela yokwenza ifoni yephepha ngezandla zakho
Iphepha alisebenziswanga kuphela ngenjongo yalo ehlosiwe. Kuvela ukuthi lokhu kuyisici esihle sokwenza ubuciko. Isibonelo, ungakha ifoni kusuka ephepheni noma iyiphi imodeli. Ukubiza ukuthi akunakwenzeka, uma nje kubangani abacabanga, kodwa lokhu kuyithuluzi elihle labantwana, ngoba ukudalwa akudingi ukutshalwa kwezimali kanye namakhono akhethekile. Ukwakhiwa kwemikhiqizo enjalo kudinga ukunemba, noma kunjalo, ngemva kokubukela ividiyo, ngeke kube nzima ukubona indlela yokwenza ifoni yezandla ngezandla zabo.
Izandla ezivela ithanga onesihloko esithi "ekwindla" yesikole ne-enkulisa: isigaba samakhono
Ukusajingijolo kumuthi womuntu
I-Vanilla pie ne-cranberries
Indlela yokuphila emva kokufa komyeni?
Isikhumba sesibili: indlela yokubhekana nayo?
Uju kanye nezakhi zalo zokwelapha
Inkukhu inyama eTeriyaki sauce
Ukwelashwa kwezinkinga zokungenwa kwezingane ngamakhambi abantu